Yakavhurika machining centre inogona kuchinjanisa chishandiso mumushini wekugadzira, inogona imwe nguva kuputira mana zvigayo, kudhiraivha, kushandura zvekare, kushungurudza, kushambadza, kutapa, uye mamwe maitiro. Maumbirwo emuchina wekushandisa rigidity, hosha yakakura, yakanyanya kujeka, inoshanda kune ese marudzi ekucheka kwakanyanya, yakanyanya kujekesa michina yekugadzirisa shamba, inovimbisa zvinodikanwa zvekugadzirisa nekukwira kwakanyanya uye kwakanyanya kukwirira kwechigadzirwa chimwe kana chidiki che batch.
Akakwenenzverwa machining centre inogona otomatiki kuchinjisa chishandiso mumashini maitiro, imwe nguva inogona kusungira mana epasi milling, kudhiraivha, kushandura zvekare, kushungurudza, kushambadzira, kubaya, uye zvimwe process.Chimiro chemushini chishandiso chakaomarara, kuwanda kukuru, kukwirira kwakanyanya, kushanda kune marudzi ese ekuremerwa,
Kuburikidza neyechimanje echimiro ekugadzira nzira dzekubatanidza dhizaini yekugadzira uye yakasarudzika element nzira dhizaini, uye nekubatanidza iyo yemuchina wose wemo thermogenic manejimendi tekinoroji uye ergonomics engineering dhizaini yekugadzira, muchina wese unosvika kune hunhu hwepamusoro kuomarara, kuwanda kwemagetsi. kugadzikana kwemafuta, nezvimwe,
Yakashandiswa zvakanyanya mumhepo yekubhururuka, auto, chaiyo kuumba maindasitiri, GMF akateedzera anogona kupa yakakwirira-inoshanda masystem system uye software interface iyo inogona kushanda nyore. Izvi zvinopa akawanda sarudzo yesarudzo dzakawanda dzinozobvumidza iwe kuti uzadzise zvizere kurongeka kwakanyanya.
Roller-mhando mutsara wedombo rekutenderera rine yakakwirira kuomarara uye yakanyanya kutsanangudza, iyo yakakodzera kutemwa dzinorema.
Z axis inotora ina-track kana mraba kurara chimiro, chakanakira vatengi kusarudza michina yemuchina. Ina-track inokodzera yekumhanyisa-kumhanyisa mashandiro, uye yekurara makiromita yakakodzera kune yepamusoro-kuomarara kugadzirisa.
Z yakatungamirwa bhokisi mubhokisi mhando symmetric chimiro inovimbisa kudzika kucheka kusagadzikana, uye kushoma kupisa kwemafuta.
Screw hollow kutonhora zvinobudirira inodzivirira kuwedzera kwemafuta.
Kunze kwekusiyana-siyana maitiro ekugadzirisa enzvimbo yekumhanyisa, VM inoteedzera yekumisheni yekugadzirisa nzvimbo yakagadzira hunyanzvi hwakagadziridzwa mukugadzika uye kurongeka kwakatarisana nehunhu hweiyo indasitiri yekugadzira indasitiri, iyo inogona kugutsa zvinodiwa zvekuratidzika kwakanyanya, kuchena kwakanyanya uye kupisa kwakadzika wedzera kana iyo bundu contour yagadziriswa.
Kunze kwekusiyana-siyana kwemaitiro ekumhanyisa nzvimbo yemuchina, V inoteedzana yakamhanya-mhanya yekumhanyisa machining centre yakaratidza yakarongedzwa dhizaini ichitarisa kumhanya nekumusoro uye zvakaringana zvinodiwa pazvinhu zvechigadzirwa kudhinda indasitiri pane kwese kurongwa uye chimiro.
Uchishandisa nzira yekumberi cantilever uye yehurefu kubatika dhizaini, demo rakatwasuka rinopatsanurwa kubva munzvimbo yekugadziriswa, uye yakanakisa yakasimba yekuita uye yakanakira kushanda nzvimbo inowanikwa.
General Vertical Machining centre, inonyanya kushandiswa pakati nepakati uye saizi zvikamu, basa racho mune fomati inogona kunge iri yekupedzesa chigayo, kuchera, kukweretesa, kushandura zvekare uye mamwe maitiro ekugadzirisa. Iyo inogona kuve imwechete inoshandiswa uye inogona zvakare kushandiswa kwakawanda mashandiro pane zvikamu mumutsara wekugadzira. Kucheka neine simba, yakakwirira-mhanyisa kumira, yekubatanidza yemagetsi uye yemagetsi, otomatiki chip kutonga uye kuchengetedza maitiro.